Nagu saabsan - Shaoxing Liuyi Textile Import & Export Co., Ltd.
Shaoxing Liuyi Dharka CO., LTD waa shirkad soo dejinta iyo dhoofinta dharka oo xirfad leh oo ku takhasustay cilmi baarista iyo horumarinta, naqshadeynta, iyo iibinta marooyin kala duwan. Waxaan joognaa magaalada dharka ee Shiinaha ee gobolka Zhejiang, oo ah xarunta ugu weyn ee qaybinta dharka Aasiya. Ku xigta dekedda Ningbo iyo dekedda Shanghai, waxaan haysannaa gaadiidka badda ee ugu habboon kaas oo u oggolaanaya shixnadda waqtigeeda. Kooxdayada ganacsiga shisheeye waxay leeyihiin in ka badan 20 qof, si gaar ah loo soo kiraystay nashqadeeyayaasha dharka, shaqaalaha ogaanshaha dharka, hawlgalka mareegaha, iwm, tiro badan oo talanti ah.
Fuzhou Liufang tolidda Co., Ltd. waa warshad waxsoosaarka ee shirkadeena, qalab casri ah iyo kooxda farsamo, si aan si wanaagsan ugu dammaanad qaadno tayada alaabta.
Ku saabsan cilmi -baarista badeecadda iyo horumarinta, waxaan u hoggaansanaynay xirfadda, dabeecadda dhabta ah.Waxaan ballan -qaadnay inaan ku siinno adeeg macmiil oo weyn iyo sidoo kale tayada badeecada oo la isku halleyn karo.
Badeecadaheena ugu weyni waa dhar tulle ah, dhar mesh ah, maro xarig, xargo xarig, dhar tollan, dhar spandex, dharka dabaasha iyo daabacaadda / daabacaadda / qulqulka / roonaanta / xiidmaha / dhaldhalaalka / dhaldhalaalka / dhoobada dhoobada, dharka dumarka, nigiska dumarka, dharka arooska, dharka isboortiga, dabaasha, qurxinta, iwm, waxaan samaynaa alaab tayo sare leh waxaanan xoogga saarnaa suuqa dhexe iyo kan sare.
Waxaan leenahay shanta faa'iidadood ee ugu waaweyn:
1.Ma aha oo kaliya inaan haysanno kooxda R&D, laakiin waxaan sidoo kale nahay soo -saareyaal. OEM iyo ODM waa la aqbali karaa.
2.Waxaan leenahay shaybaarka tijaabinta dharka si loo buuxiyo shuruudaha tayada sare ee macaamiisha.
3.Waxaan u qaadannaa macaamiisha xarunta, adeegga ujeedka, tayada sida dammaanadda.
4.Waxa kaliya oo aan soo saarnaa marooyin, laakiin waxaan sidoo kale samayn karnaa wax badan oo dib-u-farsamaynta marooyinka, sida daabac-gacmeedka, daabacaadda, jilicsanaanta, qulqulaya, dhoobada iyo wixii la mid ah.
5.Waaxda kormeerka tayadayadu ma kormeeri doonto oo kaliya hab kasta oo wax soo saar, laakiin waxay kaloo fulin doontaa kormeerka tayada kama dambaysta ah ka hor inta aan la soo dirin, waxayna ku siin kartaa warbixinta tayada u dhiganta.